လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Thadin
HomeKNOWLEDGEလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
February 11, 2019 Admin Kwee KNOWLEDGE Comments Off on လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ခေတ်ကလည်း ၊ ‘‘ အင်တာနက်ခေတ်’’ ဆိုတော့ မြန်တယ်လေ။ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေထက် လယ်မြေတွေ အရောင်းသွက်တယ် ကြားတော့ ရန်ကုန်ကနေ နယ်ဆင်းပြီး လယ်မြေတွေဝယ်ဖို့ စုံစမ်းကြ ပြန်တယ်။
အချို့ ကလည်း လယ်မြေတွေဝယ်ထားပြီးမှ၊ ခိုင်ခိုင် မာမာ စာရွတ်စာတမ်းတွေကိုင်ထားချင်လို့ ပါဆိုပြီး ‘‘အရောင်းအဝယ် စာချုပ်အပြင် ဘာတွေကိုင်ထားဖို့လိုပါသလဲ’’ ဆိုပြီး စာရေးသူထံ လာရောက်တွေ့ ဆုံ မေးမြန်းတဲ့ သူတွေလဲရှိပြန်တယ်။
“အိမ်ခြံမြေ အမည်ပြောင်းပုံ ၃ မျိုး”
လယ်မြေနဲ့ အိမ်ခြံမြေ ဆောင်ရွက်ပုံ မတူဘူးလေ ။
အိမ် ခြံ မြေကတော့
– မြေချ ပါမစ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊
– အနှစ် ၆၀ ဂရန် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊
– ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ဒါကိုတွေ့ ရမယ်။
မြေချပါမစ် ၀ယ်ပြီး၊ အနှစ်၆၀ ဂရန်လုပ်ပြီး ၊ ကိုယ့်အမည်ပေါက် ဂရန် လုပ်လို့ ရတယ်။ အခွန်ဆောင်စရာမလိုဘူး။ ဟော… သူများ အမည်ပေါက် အနှစ်၆၀ ဂရန်ဆိုရင် ၊ အခွန်ဆောင်ပြီးမှ ကိုယ့် အမည်ပေါက် ပြောင်းလို့ ရတယ်။ ထို့ အတူပဲ…. ဘိုးဘွားပိုင်မြေဝယ်ရင်လည်း အခွန်ဆောင်ပြီးမှ ကိုယ့်အမည်ပေါက် ပြောင်းလို့ ရတယ်လေ။
လယ်ယာမြေကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) ကို မြို့ နယ်ရုံးမှာပဲ မှတ်ပုံတင် စာချုပ် လို့ ရတယ်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) ရှိသူထံက ၀ယ်ရင်း၊ အဲဒီ လယ်ယာမြေရှိတဲ့ ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီး ဌာန ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင် စာချုပ် ရတယ်။
အဲဒီမြို့ နယ် အခွန်ဦးစီးဌာန ရုံးကဘဲ တန်ဖိုးဖြတ်ပေးတဲ့ အတိုင်း အခွန်ဆောင်ရတယ်။ပြီးတော့ မှဝယ်သူရဲ့ အမည်နဲ့ 
လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) ကိုအဲဒီမြို့ရဲ့ ကြေးတိုင်နဲ မြေစာရင်းရုံးမှာ ယူလုပ် ရတယ်။ မြို့ နယ်မြေ တွေမှာတော့ ” မြို့ နယ်မြေစာရင်းဦးစီးမှူးနဲ့မြို့နယ်စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိ တာဝန် နှစ်ခုအတွက် ဦးစီး အရာရှိ
တစ်ဦးထဲကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထား တယ်” လို့ သိရပါတယ်။
လယ်မြေအမည် မပြောင်းချင်ရင် ရောင်းသူထံ ကပါဝါယူထားပေါ့။ ဒီတော့ ‘‘လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇)၊ ကိုအမည် မပြောင်းချင်သေးဘူး။ အိမ်ခြံမြေလိုပဲ ၀ယ်ရောင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတွေထဲက အထွေထွေ ကိုယ်စားလှယ် လွဲစာ ယူထားလိုက်ပေါ့ ။
အဲဒီအထွေထွေ ကိုယ်စားလှယ် လွဲစာကလဲ အဲဒီလယ်ယာမြေရှိတဲ့ မြို့ နယ်ကြေးတိုင်နဲ့ မြေစာရင်းရုံးမှာပဲ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီလို လယ်ယာမြေအမည်ပေါက်ထံက General Power (အထွေထွေ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ)ယူထားပြီးပြီ
ဆိုရင် တော့ အခြားဝယ်သူတွေကို ပါဝါ နဲ့ ပြန်ရောင်းပေါ့ ။ အမည်ပေါက် ကိုယ်စား လက်မှတ်ထိုးပေးလို့ရတယ်.။”
နယ်မြို့ တွေမှာ အထွေထွေ ကိုယ်စလှယ် လွှဲစာတို့ ၊ အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာတို့ ကို တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး
အဆင်သင့် ရောင်းတာမျိုးတော့ သိပ်မရှိကြဘူး။ ဒီတော့လည်း ရန်ကုန်မြို့ ဘားလမ်း (မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်း)က
အဆင့်သင့် ရောင်းတဲ့ ပါဝါတွေ ၀ယ်ထားလိုက်ပေါ့ ။
လက်နှိပ်စက်ရေးဖို့ လိုရင်တော့၊ မြို့ နယ်တရားရုံးတွေမှာ စာသွားရိုက်လို့ ရပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ 
လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) အရောင်းအဝယ် လုပ်ပေးတဲ့ အဆင့် ကိုကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ 
တောရွာ မြေစာရင်းဦးစီးဌာန က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အဲဒီ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာပဲ ဆောင်ရွက်လို့ ရကြောင်းကြား သိရပါတယ်။
Credit – လွှတ်တော်ရှေ့နေမောင်ကောင်းဖေ
ခတျေကလညျး ၊ ‘‘ အငျတာနကျခတျေ’’ ဆိုတော့မွနျတယျလေ။ အိမျ၊ ခွံ၊ မွထေကျ လယျမွတှေေ အရောငျးသှကျတယျ ကွားတော့ ရနျကုနျကနေ နယျဆငျးပွီး လယျမွတှေဝေယျဖို့စုံစမျးကွ ပွနျတယျ။
အခြို့ကလညျး လယျမွတှေဝေယျထားပွီးမှ၊ ခိုငျခိုငျ မာမာ စာရှတျစာတမျးတှကေိုငျထားခငျြလို့ပါဆိုပွီး ‘‘အရောငျးအဝယျ စာခြုပျအပွငျ ဘာတှကေိုငျထားဖို့ လိုပါသလဲ’’ ဆိုပွီး စာရေးသူထံ လာရောကျတှဆေုံ့ မေးမွနျးတဲ့ သူတှလေဲရှိပွနျတယျ။
“အိမျခွံမွေ အမညျပွောငျးပုံ ၃ မြိုး”
လယျမွနေဲ့အိမျခွံမွေ ဆောငျရှကျပုံ မတူဘူးလေ ။
အိမျ ခွံ မွကေတော့
– မွခြေ ပါမဈ ဖွဈခငျြဖွဈမယျ၊
– အနှဈ ၆၀ ဂရနျ ဖွဈခငျြဖွဈမယျ၊
– ဘိုးဘှားပိုငျမွေ ဖွဈခငျြဖွဈမယျ၊ ဒါကိုတှရေ့မယျ။
မွခေပြါမဈ ဝယျပွီး၊ အနှဈ၆၀ ဂရနျလုပျပွီး ၊ ကိုယျ့အမညျပေါကျ ဂရနျ လုပျလို့ရတယျ။ အခှနျဆောငျစရာမလိုဘူး။ ဟော… သူမြား အမညျပေါကျ အနှဈ၆၀ ဂရနျဆိုရငျ ၊ အခှနျဆောငျပွီးမှ ကိုယျ့အမညျပေါကျ ပွောငျးလို့ရတယျ။ ထို့အတူပဲ…. ဘိုးဘှားပိုငျမွဝေယျရငျလညျး အခှနျဆောငျပွီးမှ ကိုယျ့အမညျပေါကျ ပွောငျးလို့ရတယျလေ။
လယျယာမွကေတော့ဒီလိုမဟုတျဘူး။ လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့လကျမှတျ (ပုံစံ-၇) ကို မွို့နယျရုံးမှာပဲ မှတျပုံတငျ စာခြုပျ လို့ရတယျ။ လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့လကျမှတျ (ပုံစံ-၇) ရှိသူထံက ဝယျရငျး၊ အဲဒီ လယျယာမွရှေိတဲ့ ကွေးတိုငျနှငျ့ မွစောရငျးဦးစီး ဌာန ရုံးမှာ မှတျပုံတငျ စာခြုပျ ရတယျ။
အဲဒီမွို့နယျ အခှနျဦးစီးဌာန ရုံးကဘဲ တနျဖိုးဖွတျပေးတဲ့အတိုငျး အခှနျဆောငျရတယျ။ပွီးတော့ မှဝယျသူရဲ့အမညျနဲ့
လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့လကျမှတျ (ပုံစံ-၇) ကိုအဲဒီမွို့ ရဲ့ကွေးတိုငျနဲ မွစောရငျးရုံးမှာ ယူလုပျ ရတယျ။ မွို့နယျမွေ တှမှောတော့ ” မွို့နယျမွစောရငျးဦးစီးမှူးနဲ့ မွို့နယျစာခြုပျစာတမျး မှတျပုံတငျအရာရှိ တာဝနျ နှဈခုအတှကျ ဦးစီး အရာရှိ
တဈဦးထဲကို လုပျပိုငျခှငျ့ပေးထား တယျ” လို့သိရပါတယျ။
လယျမွအေမညျ မပွောငျးခငျြရငျ ရောငျးသူထံ ကပါဝါယူထားပေါ့။ ဒီတော့ ‘‘လယျယာမွပေိုငျဆိုငျခှငျ့လုပျပိုငျခှငျ့လကျမှတျ (ပုံစံ-၇)၊ ကိုအမညျ မပွောငျးခငျြသေးဘူး။ အိမျခွံမွလေိုပဲ ဝယျရောငျးလုပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ အဲဒီလယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ ရှိသူတှထေဲက အထှထှေေ ကိုယျစားလှယျ လှဲစာ ယူထားလိုကျပေါ့။
အဲဒီအထှထှေေ ကိုယျစားလှယျ လှဲစာကလဲ အဲဒီလယျယာမွရှေိတဲ့မွို့နယျကွေးတိုငျနဲ့မွစောရငျးရုံးမှာပဲ လုပျလို့ ရပါတယျ။ အဲဒီလို လယျယာမွအေမညျပေါကျထံက General Power (အထှထှေေ ကိုယျစားလှယျလှဲစာ)ယူထားပွီးပွီ
ဆိုရငျ တော့အခွားဝယျသူတှကေို ပါဝါ နဲ့ပွနျရောငျးပေါ့။ အမညျပေါကျ ကိုယျစား လကျမှတျထိုးပေးလို့ ရတယျ.။”
နယျမွို့တှမှော အထှထှေေ ကိုယျစလှယျ လှဲစာတို့၊ အထူးကိုယျစားလှယျ လှဲစာတို့ကို တံဆိပျခေါငျးကပျပွီး
အဆငျသငျ့ ရောငျးတာမြိုးတော့သိပျမရှိကွဘူး။ ဒီတော့လညျး ရနျကုနျမွို့ဘားလမျး (မဟာဗန်ဓုလ ပနျးခွံလမျး)က
လကျနှိပျစကျရေးဖို့လိုရငျတော့၊ မွို့နယျတရားရုံးတှမှော စာသှားရိုကျလို့ရပါတယျ။ လကျရှိအနအေထားမှာတော့
လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့လကျမှတျ (ပုံစံ-၇) အရောငျးအဝယျ လုပျပေးတဲ့အဆငျ့ကိုကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးနဲ့
တောရှာ မွစောရငျးဦးစီးဌာန က တာဝနျရှိသူတှနေဲ့အဲဒီ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှာပဲ ဆောငျရှကျလို့ ရကွောငျးကွား သိရပါတယျ။
Credit – လှတျတျောရှနေ့မေောငျကောငျးဖေ
တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးဖွားသူများအတွက် (၁)နှစ်စာဟောစာတမ်း -၁၃၈၁-ပြည်နှစ်(၂၀၁၉)
This Month : 35581
This Year : 177038
Total Users : 536062
Total views : 2425069